Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Italiantali Andrea Belotti Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Goal Poacher nke amara aha ya mara; 'ọkpa'. Anyị Andrea Belotti Child Akụkọ na Iwepụ Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha, ndabere ezinụlọ, ndụ mmekọrịta, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-egosi banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ ihe nnọchianya nke oge a n'ọdịnihu. Otú ọ dị, ọ bụ naanị ole na ole ka Andrea Belotti si Bio bụ nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Andrea Belotti Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Ndụ mbido
A mụrụ Andrea Belotti na 20th ụbọchị December 1993 na Calcinate, obodo Italy nke gbasara mkpụrụ obi 6,000 n'ógbè Bergamo. Dị ka n'oge a mụrụ ya, mama ya na-arụ ọrụ dịka onye na-agbanye ụlọ ọrụ uwe elu. Nna Belotti bụ onye wuru ụlọ na 7 ma laghachi na 7 elekere na ikpere ya kụrụ.
Andre Belotti toro na nwanne ya nwoke nke nta, bụ Matteo bụ onye isi nri na onye a ma ama na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Ịtali. N'oge edere nne na nna ya abụọ lara ezumike nká ma na-enwe obi ụtọ ugbu a na nkwekọrịta nke ịga nke ọma nwa ha. N'ikwu okwu banyere ezumike nká nke nne na nna ya, ọ kwuru otu oge;
"Enwere m oge iji kwenye na mama na papa m lara ezumike nká n'ihi na achọghị m imejọ ha".
A mụrụ Belotti na ezinụlọ ndị Katọlik. Enye ama ada ediwak ini ke ini enye ekedide eyenọwọn̄ ke itieutom San Pancrazio di Gorlago, obio emi enye ekedide eyenọwọn̄.
Andrea Belotti Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Afọ Ọhụụ Mbụ
Belotti nwere àgwà na-adịghị agbanwe agbanwe iji nwee ihe ịga nke ọma site na mmalite. Ọ malitere ịzụlite agụụ ya maka football na oratory nke Gorlago. Ọ bụ àgwà nke ezinụlọ ya mere nke mere ka ọ gbasaa.
Nzọụkwụ Belotti nke abụọ dị ka ndị na-agba ọsọ na Grumellese, otu osisi dị n'okpuru ala nke usoro Ịgba Ịtali. Dị ka ndị na-eto eto na-eto eto, ọ na-ekpere arụsị Andrey Shevchenko. Mgbe ọ na-egwu egwu Grumellese, nwa agbọghọ Belotti nakweere ọnwụnwa maka Atalanta na AlbinoLeffe. Ọ dara nke mbụ ma hụ nkwekọrịta ịkụ egwu na mpaghara ndị ntorobịa nke abụọ ebe o nwetara dị ka onye a kpụziri dị ka ebe etiti. Mgbalị ndị sitere n'aka ụlọ ahụ, ndị mụrụ Belotti dịka nna ya na-etinye ya n'ime ụkpụrụ omume ọma. Dị ka Belotti si kwuo ya;
Nna m gwara m, sị: 'Ọ bụrụ na ịnwụghị ike, ọ pụtara na ị nyeghị ya niile,'
Site na mkpebi siri ike, Belotti duru ndị otu ya iji merie isiokwu ntorobịa "Trofeo Dossen". Lee foto n'okpuru.
Imeri isiokwu onye ntorobịa mere ka o bulie elu n'ogo nke ụlọ ọrụ ahụ nke dị ka n'oge ahụ na-akpọ Italian Serie C.
Andrea Belotti Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Na-eto Eto
Belotti abata AlbinoLeffendi isi na ndi nwere uche iji gbalie ike imezu ihe mgbaru ọsọ ya. O nwere ike ịgbanwe echiche ya dị ka ihe omume dị na pitch. Ọ bụ ezie na ndị ọzọ na-eto eto kpakpando malitere biri na nke atọ, Belotti rọrọ na-ahụ onwe ya na Italian ụlọ elu. Imezu nrọ a pụtara ịba ọtụtụ àjà. O kwuru otu oge;
"Ọ bụ ihe siri ike mgbe m ka bụ nwata ma hụ ndị enyi m niile na-apụ apụ na-akụ. M na-alakpu ụra n'oge na-eru anya na anya mmiri n'ihi na m ga-egwu n'echi ya. Ịmụta ụzọ siri ike akwụ ụgwọ maka m. "
Na mbụ oge nke ya agadi ọrụ, Belotti ghọrọ onye kasị eji egwu. N'otu afọ ahụ, nrọ ya na-egwuri egwu n'ọfụfụ Ịtali dị elu bịara na-ebute ma na-akwụ ụgwọ. N'ịchọ iji nweta onwe ya usoro Ịgba Ịtali, Belotti ga-akwụ ụgwọ ụgwọ. Dị ka ya si kwuo,
"Mgbe m kwagara Palermo, ekwetara m ịkwụ ụgwọ m ụgwọ site na € 400,000 n'ihi na ha enweghị ike iji ego buru ibu nye onye si na nkeji nke atọ. M na-eji ego ahụ eme ihe dị ka itinye ego, nkwụ onwe m.
Na Palermo, ọ na-egwuri egwu Paul Dybala. Na oge abụọ, Belotti na-edu ndị otu ya iji merie Serie A. Nke a bụkwa oge ọ meriri obi nwunye ya n'ọdịnihu, Giorgia Duro. Na ndị ọzọ ọ bụghị iji ọsọ gaa n'elu Europe, Belotti kwetara na ọ ga-aga Torino.
Na Torino, a mara Belotti maka ogwu siri ike ya, nhazi ngwa ngwa, ọgụgụ isi. Karịsịa, ya arụ ọrụ na anya maka ihe mgbaru ọsọ wee hụ ụwa. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Andrea Belotti Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Ndụ mmekọrịta
N'elu onye ọ bụla na-agba ọsọ Ịtali nke ọma, e nwere nwunye mara mma, enyi ma ọ bụ enyi nwanyị. Obi abụọ adịghị ya na ikike Andrea Belotti nwere ikike, tinyere ndụ ya site na pitch ga-enyere gị aka ịmepụta ya zuru ezu. Belotti ugbu a lụrụ Giorgia Duro dị ka n'oge ederede.
Ma Belotti na Giorgia bụ ndị hụrụ Jack Russel nkịta aha ya bụ Angi bụ ndị yiri nwa nwoke abụọ ahụ. Dị ka Belotti si kwuo ya;
M gwara ya site na itinye mgbanaka na imi nke nkịta anyị, Angi.
Di na nwunye ahụ lụrụ na June 2017 na Palermo, obodo Giorgia. Ọ bụ ememe ndị agha na Palermo nke ọtụtụ ndị VIP gụnyere ndị enyi ya, Ciro Immobile.
N'ụbọchị agbamakwụkwọ ha, Belotti họọrọ inye Giorgia okwu ịhụnanya dị ebube. N'okwu ya;
"DEAR GIORGIA, ECHI M, ABỤ M AHỤ M N'ỤLỤ M. M BỤTA, ANYỊ NA-EKWU AHỤ. ANYỊ NA-EKWESỊ ANYỊ KWESỊRỊ ỤBỤRỤ NA ANYỊ BỤRỤ KWEERE YA. A HỤRỤ M GỊ N'ANYA. M ga-ehichapụ ndụ gị niile. KWESỊRỊ. AKWỤKWỌ "EE" KWURU CHINEKE KWESỊRỊ NDỊ Ọ BỤ Ọ BỤ Ọ BỤGHỊ ỌZỌ M GA-EKWU. Ugbu a, enweela ezinụlọ ".
Maka onye ọ bụla hụrụ ya ma ọ bụ hụ foto, di na nwunye ahụ nwere agbamakwụkwọ. Otú ọ dị, foto ndị bịara n'abalị agbamakwụkwọ ha gosipụtara esemokwu esemokwu ndị na-ebipụta akwụkwọ Ịtali ruo ọtụtụ ụbọchị. Hụ okpuru.
Nwunye Belotti Giorgia Duro ugbu a na-akwado isi ihe ntanetị karịa ndị na-eso 56k na Instagram ekele maka ụcha nke na-acha ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara na anụ olive nke dị n'okpuru.
Andrea Belotti Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Ezigbo ememe mgbaru ọsọ
A maara Belotti maka ememe ncheta ya nke gụnyere itinye aka n'elu isi ya iji mee ka a mara oke ọkpa. N'ihi nke a, a kpọrọ ya 'Il Gallo'- nke pụtara n'ụzọ nkịtị "Onye na-agụ anụ". A na-enye aha ya aha ekele a maka mmegharị akwara ya. Dị ka Belotti si kwuo;
"Oge mbụ m mere ngwongwo nke ọkpa ahụ bụ n'ihi na m kwere ya enyi m Yuri Gallo. Nwanne mama m gwara m na mgbe m bụ nwa ewu, m ga-abịa n'ugbo iji chịkọta àkwá, kama kama ị ga-agbanye ọkụkọ ọkụ. "
Andrea Belotti Child Story Plus Na-agbagha akwụkwọ akụkọ Eziokwu: Ndụ nke Onye
N'ihe ndekọ nke onwe ya, Belotti na-emesapụ aka, na-eme ezigbo ihe ma nwee ihu ọchị. Ọ nwere motto tattooed na ogwe aka ya nke sitere n'ike mmụọ nsọ Michael Jordanekwu okwu nke na - ekwu;
'Ebere, dị ka egwu, na-abụkarị ihe mgbagwoju anya.'
Belotti bụ onye na-achọ ịmata ihe, nke siri ike ma nwee echiche na-enweghị uche na nkà ihe ọmụma. Ọ na-enwe ike ịgbanwe echiche ha dị ka ihe dị iche iche ma ha ga-eme ihe ọbụla iji nweta ihe mgbaru ọsọ ya. Ọ na-atụ anya ịbịakwute nwanne ya nwoke n'inwekwu ụlọ nri mgbe ọ lara ezumike nká.
Belotti n'oge ọ bụ nwata na-amụ ọtụtụ afọ. Mgbe ọ bụ nwatakịrị, ọchịchọ ya ga-enwe ihe ndị a;
(1) Isi nke Mario Gomez. (2) Fernando Torres'ikike ịkwanye ndị na-agbachitere (3) Didier Drogba's nke anụ ahụ (4) Ọkpụkpụ nke Sergio Aguero.